दिप्सन लुइटेल काठमाडौं, १७ साउन
‘टिकटक’ विश्व चर्चित ‘एप’ बनेको छ । नेपालमा पनि यसको क्रेज गज्जब छ । टिकटकबाट अहिले धेरै जना सेलिब्रेटी बनेका छन् ।
त्यससँगै टिकटक अहिले गीत-सङ्गीत प्रचारको गतिलो माध्यम बनेको छ । टिकटककै कारण धेरै गीतहरू ‘हिट’ भएका छन् । भ्युअर्स बढाएका छन् ।
टिकटकबाट नै हिट भएको पछिल्लो गीत हो, ‘ओए काजल… ।’ यस गीतमा टिकटक नबनाउने टिकटक प्रयोगकर्ता कमै होलान् । यस गीतका हरेक शब्दमा टिकटक बनेका पाइन्छ ।
यस गीतका गायक/लेखक तथा सङ्गीतकार हुन्, चक्र बम । उनी पनि आफ्नो गीत टिकटकका कारण हिट भएको कुरालाई नकार्न सक्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘रिलिज गरेको २ दिन त भ्युज नै गएन नि ! जब टिकटक बन्न थाल्यो, त्यसपछि युट्युबमा गुटुङटुङ भ्युज गएको हो ।’
चक्र बम र टिकटकबाट नै चर्चामा आएकी गीता ढुंगाना फिचर भएको यस गीतले युट्युबमा ५० लाखको हाराहारी भ्युज पाइसकेको छ । यस गीतलाई दर्शक/श्रोताले पनि खुबै रुचाएका छन् ।
सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा चक्र बमको नाम गतिलो बनिसकेको थियो । ‘नाच मेरी झुमा', 'विद्यानास', 'दारु सड्काउने’लगायत केही हिट गीत गाइसकेका चक्रलाई स्टेज कार्यक्रम भ्याईनभ्याई नै थियो ।
चक्रले नाम कमाएका थिए, दाम कमाएका थिए । स्टारडम पनि देखिसकेका थिए । स्टेजमा पुग्दा दर्शक झुम्मिन्थे, स्वरमा स्वर मिलाउँदै चिच्याउनेहरू धेरै भेटिसकेका थिए ।
यति 'हिट' भए पनि चक्र सन्तुष्ट हुन सकेका थिएनन् । उनको मनमा एउटै हुटहुटी थियो, ‘मलाई अझै केही गर्नु छ । नयाँ शैलीमा काम गरेर सुदूर र मध्यपश्चिममा होइन, देशभर आफूलाई चिनाउनु छ ।’
तर, चक्रलाई फुर्सद नै कहाँ थियो र ! देश, विदेशका स्टेज कार्यक्रम । दर्शकको रोजाइमा गीतहरू गाउनुपर्ने बाध्यता । उनले नयाँ सिर्जना गर्ने मौका नै पाएका थिएनन् ।
तर, यो लकडाउनमा मिलेको फुर्सदले चक्रलाई नयाँ सिर्जना गर्ने हौसला दियो । यही फुर्सदमा उनले शब्द कोरे, सङ्गीत भरे र गीत रेकर्ड गराए ।
चक्र भन्छन्, ‘कार्यक्रममा जाने, गाउने, आउने । फेरि जुन चलिरहेको छ, त्यस्तै गीत बनाउने भइरहेको थियो । अहिले फुर्सदको समय भने केही पृथक काम गर्ने भन्ने हिसाबमा आफूले चाहेजस्तै काम गर्ने मौका मिलेको थियो । त्यसलाई सदुपयोग गरियो ।’
गीतको भिडियो पनि लकडाउनको समयमा नै तयार भयो । चक्र भन्छन्, ‘गीता ढुंगानाले टिकटकमा देउडा गीतको टिकटक बनाउनुहुन्थ्यो । उहाँको हाउभाउ एकदमै मनपरेको थियो । त्यसैले उहाँलाई यो गीत सुट हुन्छ भनेर अफर गरियो अनि लकडाउनमा नै भिडियो पनि तयार गरियो ।’
कुमाउ/गडवालका र असमी गीतबाट प्रभावित भएर तयार भएको ‘ओए काजल…’ रिलिजपछि यति हिट होला भन्ने चक्रले सोचेका थिएनन् । उनी भन्छन्, ‘केही फरक काम भएको छ । यो काम नोटिस हुन्छ भन्नेचाहिँ थियो तर यति हिट होला भन्ने त सोचेको पनि थिइनँ ।’
गीतबाट आएको प्रतिक्रियाले बल्ल चक्रलाई सन्तुष्टि मिलेको छ । सङ्गीत क्षेत्रकै व्यक्तिहरूबाट आएको म्यासेजले पनि चक्रको मन भरिदिएको छ ।
यस गीतलाई सबै वर्गका श्रोता/दर्शकले रुचाएको चक्र दाबी गर्छन् । लोकगीत, पप, सेन्टिमेन्टल गीत सुन्नेले पनि यस गीतलाई मनपराएको चक्रको भनाइ छ ।
‘हिट के हो बुझिसकेको थिएँ तर सन्तुष्टि के हो, त्यो यही गीतले बुझाइदियो’, अनुहार उज्यालो बनाउँदै चक्र भन्छन् ।
दुःखले आर्जेको यो स्थान
सानो उमेरदेखि नै चक्र बमलाई नाच्न, गाउन मनपर्ने । उनी जसको अगाडि पनि नाच्न सुरिन्थे । गीत सुनाइहाल्थे । त्यसैले उनलाई चिन्नेहरूले भन्थे, ‘यो त कलाकार नै बन्छ ।’
चक्र कक्षा ४ मा पुगेपछि विद्यालयस्तरीय गायन प्रतियोगितामा भाग लिए । त्यहाँ उनले आफैँले गीत तयार गरे, ‘आमा ।’ उक्त गीत गाएर चक्र दोस्रो भए । त्यसपश्चात् झनै बढ्यो कलाकार बन्ने मोह ।
तर, चक्रको परिवार चक्र कलाकार नबनोस् भन्ने चाहान्थे । कलाकार भएर बाच्न गाह्रो हुने उनीहरुको बुझाई थियो । त्यसैले १२ कक्षा पास गरेपछि परिवारकै दवावमा चक्र मुम्बई पुगे । मुम्बई पुगेर उनले ल्यापटपको 'चिफ लेभल' कोर्ष गरे ।
२ जना दाजु मोबाइलको व्यापारमा थिए । त्यसैले चक्रलाई पनि परिवारले व्यापार गर्नै सुझाइरहेका थिए । तर, चक्रलाई त्यो मनपरेन ।
चक्रको एक जना दाइ आर्मीमा थिए । त्यसैले उनले आर्मीमा पनि प्रयास गरे । परिवारको दवावमा नै रहेर उनले आर्मीको लागि जंगी अड्डामा अकमा दर्खस्त दिएका थिए । चक्र भन्छन्, 'त्यहाँ १०-५ को काम थियो । गीत रेकर्ड गराउन पनि पाउने भनेपछि म आर्मीमा जागरि खान तयार भएको थिए ।
तर, त्यहाँ पनि उनी 'फिजिकल राउण्ड'मा फालिए ।
अब भने चक्रले परिवारलाई विदेश जाने आश्वासन दिए । तर, उनको मनमा सङ्गीतले अड्डा जमाएको थियो । कुनै पनि हालतमा उनलाई गायक बन्नु थियो । उनले सोचेका थिए, ‘काठमाडौं पुगेपछि त गीत रेकर्ड गराउने हो ।’
२०७० सालमा काठमाडौं छिरेका चक्रले सुदूरपश्चिमका देउडा गायक सूर्य बिरही साउद लगायत केही कलाकारसँग चिनजान बढाए । उनीहरूकै सङ्गतबाट उनी स्टुडियोसम्म धाउन थाले ।
स्टुडियो धाउन थालेपछि कोरियाका लागि पढाइ सुरु गरिसकेका चक्रले राम्रोसँग पढ्न सकेनन् । अन्तत: चक्रको कोरियाको भिसा लागेन ।
अब चक्रलाई झनै सङ्गीतमा बढी ध्यान भयो । त्यहीबीचमा चिनजान भएका विनोद बाजुरालीको रेकर्डिङ स्टुडियोमा चक्रले पहिलो देउडा गीत रेकर्ड गराए, ‘माला खेती ।’ पहिलो गीतबाट चक्रले सफलता पाएनन् ।
देउडा गीतमा केही फरकपन ल्याउने सोचले काठमाडौं छिरेका चक्रसँग एउटा गीतको शब्द थियो । तर, उक्त शब्द सुनेर धेरैले उनलाई रोके । उनको शब्द सुनेर भन्ने गर्थे, ‘देउडाको आफ्नै मौलिकता छ । यस्ता शब्दले त्यसलाई बिगार्छ । त्यसैले अहिले यो नगर ।’
यी सबै उपदेश सुनेपछि चक्रले पुरानै धारलाई पक्रिन बाध्य भएका थिए । चक्र भन्छन्, ‘पुरानो धारमा चल्ने कलाकारहरू चलिसक्नुभएको थियो । त्यहाँ आएर मैले केही नयाँपन दिन नसक्दा म कसरी चिनिन्थेँ र !’
त्यही पनि चक्रले आस मारेनन् । उनले दोस्रो देउडा गीत रेकर्ड गराए । उक्त गीतले पनि चक्रलाई डुबायो ।
विदेश जान भनेर आएको छोराले पटकपटक घरबाट पैसा माग्ने अवस्था रहेन । त्यसैले चक्रले दोहोरी साँझमा पनि काम गरे । दोहोरी साँझमा काम गर्दा नै चक्रले ११ वटा गीत रेकर्ड गराएका छन् । तर, ती सबै गीतहरू पनि असफल नै भए ।
नामको भोका चक्रलाई दिक्क लाग्यो । उनी अब विदेश जाने पक्षमा लागे । उनले दुबईका लागि प्रक्रिया सुरु गरे ।
दुबई जानुपूर्व उनलाई अन्तिम गीत बनाउने रहर जाग्यो । देउडामा नयाँपन दिने सोचले काठमाडौं छिर्दा झोलामा बोकेको शब्दलाई उनले फेरि पल्टाए र रेकर्ड गराए, ‘नाच मेरी झुमा… ।’
डान्सिङ गीत, त्यसमाथि बीचबीचमा र्‍याप मिसिएको । नाच मेरी झुमा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा निकै हिट भयो ।
‘नाच मेरी झुमा’ हिट भइसकेको थियो तर चक्रलाई अनुहारबाट चिन्ने दर्शक बनिसकेका थिएनन् ।
दशैँ नजिकिएको थियो । काठमाडौंबाट चक्रको घर कैलाली पुग्न रात्रि बसले १८ घण्टा लगाउँथ्यो । चक्र गाडी चढे ।
बसपार्कबाट गाडीले चाल सुरु गरेसँगै गीत बज्यो, ‘नाच मेरी झुमा… ।’
चक्र दंग गरे । वरिपरिका सबै यात्रुलाई हेरे । आफ्नो गीत बज्दा यात्रुले दिएको ‘रियाक्सन’ उनलाई बुझ्नु थियो । चक्रले सबै यात्रु गीतमा रमाइरहेका देखे । चक्रमा खुसीको सीमा रहेन ।
गाडीले केही किलोमिटरको दूरी पार गर्दै थियो । फेरि बज्यो, ‘नाच मेरी झुमा… ।’
दोस्रो पटक गीत बज्दा पनि उनले यात्रुको रियाक्सन बुझे । सबै रमाइरहेकै थिए । ‘आहा ! दोस्रोचोटि सुन्दा पनि दिक्क मानेनन्’, चक्रको मनमा खुसी थपियो ।
१८ घण्टाको यात्रामा दर्जनौँ पटक ‘नाच मेरी झुमा’ बज्यो । आफ्नो गीत सुन्दै घर फर्किएकाले होला, चक्रलाई १८ घण्टाको यात्रा २ घण्टा जस्तो पनि लागेन ।
गीत हिट भयो । चक्र बम नाम पनि दर्शकले चिने । तर, चक्रलाई अनुहार चिनाउने रहर भयो । दशैँ सकेर उनी तुरुन्तै काठमाडौं फर्किए ।
बीचमा उनले केही गीत गरे, जसले एक किसिमको उचाइ लियो । तर, ‘दारु सड्काउने’ गीत यस्तो ‘ब्लास्ट’ भइदियो कि चक्रलाई नचिन्ने देउडाप्रेमी दर्शक/श्रोता कमै भए ।
चक्र भन्छन्, ‘नाच मेरी झुमाले हिट त बनाएको थियो तर दारु सड्काउनेले अर्को लेभलमा पुर्‍याइदियो । त्यसपछि मात्र हो म स्टेज कार्यक्रममा भ्याईनभ्याई दौडिएको त ।’
चक्र हिट थिए तर मूलधारमा उनको उपस्थिति कमजोर थियो । ‘ओए काजल’ले चक्रलाई मूलधारमा चिनाएको छ । अब चक्रलाई यही स्तरको काम गर्ने चुनौती थपिएको छ ।
चक्रले पनि यस कुरालाई बुझेका छन् । उनले भने, ‘हो, अब मलाई चुनौती थपिएको छ । अहिले धेरैले चिन्नुभएको छ । उहाँहरूको मन राख्ने गरी अब मलाई त्यही स्तरको काम गर्ने दबाब बढेको छ । उहाँहरूकै लागि पनि मैले थप मिहिनेत गर्नुपर्नेछ ।’
चक्रका केही गीतहरू रिलिज हुन बाँकी छन् । तर, चक्र अहिले तत्काल ती गीतहरू रिलिज गर्ने पक्षमा छैनन् । उनले भने, ‘पहिला गरेका कामहरू यो स्तरका छैनन् होला । त्यसैले पनि अब केही समय ती कामहरूलाई रोक्छु । एउटा राम्रो काम गरेर मात्र त्यो काम सार्वजनिक गर्नेछु ।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, १७ साउन २०७७, ०७:२६:००